Ganacsatada Soomaaliyeed ee K/Afrika oo ka walaacsan go’aan ay soo saartay dowlada hoose ee dalkaasi – idalenews.com
Ganacsatada Soomaaliyeed ee K/Afrika oo ka walaacsan go’aan ay soo saartay dowlada hoose ee dalkaasi
Ganacsatada Soomaaliyeed ee wadanka K/Afrika ayaa walaac ka muujiyay go’aan ay Soomaalida ku soo rogtay dowlada hoose ee dalkaasi.
War ka soo baxay dowlada hoose ee magaalada Capetown ee wadanka K/Afrika ayaa lagu amray in dhamaan dadka ganacsatada ah ee Soomaaliyeed aysan dhex seexan karin goobohooda ganacsi, xiliga habeenkii ah iyo go’aano kale oo adag, kuwaas oo ka dhan ah Soomaalida ku ganacsada magaaladaasi.
Mid ka mid ah ganacsatada sugan ee ku sugan magaalada Capetown ee dalka K/Afrika ayaa tilmaamay in go’anadaasi aysan u cuntamin ganacsatada kuwaas oo ku aadan in dadka Soomaaliyeed ee ganacsiga ku leh magaaladaas ay galabtii kasoo rawaxaan goobohooda ganacsi halkii ay habeemkii dhex jifanjireen, si ay u ilaashadaan hantidooda, wuxuuna farta ku fiiqay in tuugada dalkaasi ay dukaamada jabsadaan iyadoo ay dhexjiifaan dadkii lahaa hadii la cidleeyane ay kasii darantahay.
Sidoo kale waxa uu intaa raaciyay in gudi ka socda ganacsatada ay ku hawlanyihiin sidii ay masuuliyiinta dowlada hoose uga dhaadhicin lahaayeen iney ka laabtaan go’aankaas oo uu sheegay inuu yahay mid loogu tala galay in lagu dhoco ganacsatada Soomaaliyeed ee ku ganacsada wadanka K/Afrika.
Wuxeyna ganacsatadu rajo xumo ka muujiyeen in hadii dukaamada laga hoydo habeenkii ay hubaal tahay inaan subaxdii loo imaaneen dukaan bedqaba, taasine waxa uu ku sheegeen iney tahay qorshe loo soo maleegay Soomaalida oo lagu doonayo in lagu dhoco hantidooda
Ganacsatada Soomaaliyeed ayaa sidoo kale tilmaamay in hadii ay ka tagaan ganacsigooda habeenkii ay dhici doonto mid la mid ah dhacdadii xanuunka badneed ee sanadkii 2008 lagu xaalufiyey hanti badan oo ay lahaayeen ganacsato Soomaaliyeed, kadib markii weeraro ballaaran lagu qaaday boqolaal dukaan oo ay Soomaalidu ku lahayd wadankaas.
Wadooyinka Magaalada Muqdisho oo dhawaan la galin Doono Nalalka Cad Ceeda Qoraxda ku shaqeeya (Daawo Sawirada)
Mudanayaal ka tirsan baarlamanka oo soo gebagebeeyay socdaal ay ku marayeen G/Galguduud